सेरोफेरो : January 2014
मेरो देश जहाँ यस्तो हुन्छ....
नेपाल, मेरो देश जहाँ कथित डनलाई गोली लाग्दा अस्पतालमा जूशको दमकल बोकेर लाइन
लाग्छन नेताहरू । तर डाक्टर केसीहरू न्यायको तिर्खामा लडिरहन्छन् ।
नेपाल, मेरो देश जहाँ सर्वोच्च अदालतले दोषी मानेको हत्याका अभियुक्त खुलेआम शिर उठाएर
हिड्छ र झुक्छ मेरो शिर ।
नेपाल, मेरो देश जहाँ सरकारी अस्पतालबाट खेदिएका गरिब बिरामीहरू सलाइन पानीको पाएपमा
बेरिएर प्राइभेटमा अस्पतालमा आत्महत्या गर्छन ।
नेपाल मेरो देश, जहाँ समयमा कर नबुझाए सरकार जनतालाई अतिरिक्त चार्ज लगाउँछ । तर
समयमा संविधान नदिने नेताहरू पटक पटक डिस्चार्ज हुन्छन् ।
नेपाल,मेरो देश जहाँ प्रहरीको मस्ट वान्टेड डन गणेश लामा गृहमन्त्री गच्छदारको बडीगार्ड बनेर
हिड्छन। प्रहरी भने चुल्ठे खोज्दै कपाल काट्दै बस्छ!
नेपाल, मेरो देश जहाँ जनआन्दोलनको बलमा सरकार बन्छ । अनि जनआन्दोलनको दोषीलाई तक्मा दिन्छ । हामीलाई भने चक्मा दिन्छ ।
नेपाल, मेरो देश जहाँ डेटिङ गएका जोडीलाई प्रहरीले समाएर थुनी दिन्छन, तर श्रीमती कुट्ने
इन्सपेक्टहरूलाई भने फुली दिन्छन् ।
मोबाइल खोस्दै उनले भने, "खिच्न पाइदैन ।"
अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन । साथीभाइसँगको भेटघाटको लागि दरबार मार्ग गएको थिएँ । भेटघाट र चिया गफमा धेरै दिनपछि सम्बन्ध रिन्यु गर्ने मौंका मिलेको थियो ।
साँझ चार बजे । बजारमा बिस्तारै चहलपहल बढ्दै थियो । दरबार मार्ग पुग्ने बित्तिकै ठूलो समस्या आइहाल्यो, बाइक कहाँ पार्किङ गर्ने ?
संयोग सोहि दिन बिहान पत्रकार साथी मेघराज रसाइलीको ब्लग पढेको थिएँ, ‘निशुल्क पार्किङको नाममा लाखौं उठाउने धन्दा ।’ Blog Link त्यसले मनमा चिसो पसिसकेको थियो ।
पार्कीङ कहाँ गर्न हुने, कहाँ नहुने भन्दै अलमलको बेला । सूचना पनि नदेखेपछि अनि धेरै बाइक पार्क) गरिराखेको देखेपछि । उनले पनि आफ्नो बाइक सोही हुलमा पार्किङ गरेको उल्लेख गरेका थिए । नगरप्रहरीको कर्के नजर परेपछि उनको एक हजार चुनालाग्यो । उनको ब्लग सोहि दिनमा पढेकोले मेरो दिमाग झनै घुम्यो । अनधिकृत ठाउँमा पार्किङमा राखिएको सवारी साधनबाट उठेको जरिवाना रकम (प्रति मोटरसाइक एक हजार) को २० प्रतिशत (दुई सय रुपैयाँ) त्यहाँ खटिएका नगर सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरीले प्रोत्साहन स्वरुप पाउने भन्ने पनि नियम बसाइ सकेका रहेछन ।
यस्तो अवस्थामा भिडभाडको दरबारमार्ग पुगेपछि टाउको किन नदुखोस ? शेर्पा मल पारिपट्टी बाइकहरू कतै एक लाइन त कतै दुई लाइन । पार्किङ भएको थियो । भर्खरै आइपुगेका केही मान्छेहरू बाइकमै बसेर कहाँ पार्किङ गर्ने भन्दै अलमलमा आँखा नचाउँदै थिए ।
पहिलो लाइन सबै प्याक । दोस्रोलाइनमा राख्नु कि नराख्नु ? अब उपाए कसले बताइदिने ? म पनि एकैछिन बाइकमै बसेर घोत्लिँदै थिएँ । पहिलो लाइनमा राखेको बाइकहरूका माझ केही सानो ठाउँ देखेँ । सरासर गएर त्यहीँ पार्किङ गरिहालेँ ।
केही बेरमा नगर प्रहरीले भरिएको गाडी आयो । फटाफट झरेका उनीहरूले दोस्रो लाइनमा रहेका बाइकहरूलाई केटाकेटीले फ्रिमा पाएको चकलेट उठाए झै उठाउन थाले । यस्तो लाग्थ्यो कि उनीहरू बाइक गाडीभित्र हैन दुई दुई सयको नोठ खल्तिभित्र हालिरहेका छन् ।
केही दिन अघि सम्म पैसा लिएरै दुई लाइन पार्किङ गरिन्थ्यो त्यहाँ । सायद त्यहाँ आएकाले अनभिज्ञतामा त्यही सोचेर बाइक त्यहाँ राखेको हुनुपर्छ । ती बाइकहरू भटाभट लैजाँदा मेरो मनमा अमिलो पस्यो ।
न त्यहाँ सबैले देख्ने गरि कुनै बोर्ड लगाएको थियो । न कुनै मान्छे खटाएर यहाँ यसरी पार्किङ गर्ने बारेमा बताइएको थियो । पार्किङ गर्ने ठाउँ खोज्न पनि म ६ मिनेट त्यस्सै आँखा टहलाएको थिएँ । त्यती बेलासम्म सघाउन कोहि आएको थिएन ।
यस्तो लाग्थ्यो कि महानगरपालिकाले पहिला बिहेको दिन छिनेको थियो अनि दुलही खोज्न हिड्दै थियो । हुन त बाइक होस् या अन्य सवारी साधन । जथाभावी पार्किङले काठमाडौंमा टाउको दुखाइको विषय नबनेको होइन । पार्किङलाई व्यवस्थीत गर्ने, दलालहरूको हातबाट पार्किङको व्यवस्था कामनपाको हातभित्र पार्ने कामनपाको अभियान स्वागत योग्य छ । दलाल मोटाउनु भन्दा सरकार मोटाउनु राम्रो हो । बरु थोरै भए पनि शुल्क तिरेर झनै व्यवस्थित हुन सक्छ भने त्यो अझ राम्रो हो । तर नियम लगाउनु अघि तयारी चाहिन्छ । पहिला ठूलो सूचना बोर्ड लगाएर अनि केही दिन जनचेतनाका कार्यक्रम गरेरमात्र नियम लागु गर्न पनि त सकिन्थ्यो । पैसा तिरून्जेल दुई लाइन पार्किङ, फ्रि भएपछि चाहि एकलाइन ? के भएको हो, एक्कासी कसरी बुझ्ने ? यस्तो अवस्थामा भट्टाभट बाइक उठाउँदै लैजादा एकाएक मनको पारो नतात्ने कुरै भएन ।
अझ पत्रकार साथी रसाइलिले यसै सम्बन्धी रिपोर्टको लागि अन्तवार्ता लिँदा काठमाडौं महानगरका राजश्व प्रमुख महेश काफ्लेले भनेका थिए, ‘हामीले बिलबोर्ड राखेर जनतालाई सूसुचित गछौं, त्यहाँ नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् । उनीहरूले कहाँ पार्किङ गर्ने नगर्ने भनेर सम्झाउन्छन र व्यवस्थित गर्छन् ।’
त्यहाँ त्यस्तो केही थिएन । सोही दिनमा झोलामा क्यामेरा राख्न छुटेछ । मैले झटपट मोबाइल झिकेर फोटो खिच्न थालेँ । भिडियो पनि लिन खोज्दै गर्दा त्यहाँ खटिएका नगर सुरक्षा प्रमुखसँग घम्साघम्सीको स्थिति भयो ।